Chickpea hummus leh paprika - TELES RELAY
ACCUEIL » rasiidhada »Chickpea hummus leh paprika
Chickpea hummus oo leh paprika waa kalooriyo yar oo ka timaada Bariga Dhexe. In kasta oo kariska asalka ah loo diyaariyey isku darka digaagga miraha sisinta ee dhulka, saliida saytuunka ah iyo digaaga, Noocan ayaa soo jeedinaya in lagu daro dhadhanka khiyaanada leh ee paprika.
Sidee ku saabsan iskuday? Waxa xiisaha u leh cuntadan ayaa ah in ay tahay mid macaan oo waxbadan soo jiidata. Sababtaas awgeed, waxaan rabnaa inaan ku barino sida loogu kala duwo dhadhankeeda waxyaabaha kale ee caafimaad leh. Sida saxuunta asalka ah, waxaad ku raaxeysan kartaa inta lagu jiro qadadaada ama casho. Xusuusnow!
Maxaad ugu sameyneysaa digaag digeelle leh paprika?
Digaagdu waa astaamaha aasaasiga ee hummus. Noocyadan noocyadooda kala duwan ee noocyadooda kaladuwan ah waxaa lagu kala gartaa sare nafaqada lagama maarmaanka ah. Marka, haddii aad raadineyso sababa aad ugu diyaarinayso bisil bisil rooti macaan guriga, waa inaad ogaataa in saxanka uu kuu keeni doono waxyaabaha soo socda:
Kaarbohaydareytyada isku buuran
Intaa waxaa dheer, hummus waa saxan hypocaloric taas oo si weyn u anfacaysa dadka raacsan cuntada vegan ama khudradeed. Thanks to qaadashada borotiinka khudradda ee muhiimka ah, waxay ku habboon tahay in nafaqada lagu kabo. Xaqiiqdii, Cuntadani waa in uu aqbalaa qofkasta oo raadinaya inuu miisaan lumisto.
Ha ka waaban inaad akhriso: Sida loo diyaariyo curry chickpea leh bariiska basmati
Recipe for digirta hummus leh paprika
Habka ugu wanaagsan ee loogu raaxeysto faa'iidooyinka nafaqada ee hummus waa in lagu diyaariyo guriga iyadoo la adeegsanayo maaddooyinka caafimaad ee loo yaqaan '100%'. Si kastaba ha noqotee, si aad u kala duwanaato dhadhanka xoogaa marka la barbar dhigo kariska cuntada, waxaan kuu soo jeedineynaa inaad Paprika ka sameyso. waad shaqaysaa!
Koobabka 2 digaag kariyey (400g)
Qaadooyinka xNUMX ee sisinta (2 g)
Qaadada xNUMX ee ah kareemka (1g)
Casiirka oo ah nus liin
Qaadooyinka 3 oo saliid saytuun ah (45 ml)
Galaaska 1 oo biyo ah (200 ml)
Garlic burburay ama budo ah
Si aad u bilowdo, kariyo digaagga biyaha illaa ay xoogaa jilicsanaadaan. Sida habboon, u oggolow inay qoyaan illaa qiyaastii 12 saacadood ka hor cuntada.
Mar alla markay diyaar ahaadaan, mayr kadibna ku rid dhalada nadiifinta.
Ka dib saddex meelood meel qeybtii digiraha ah saliid saytuun ah inteeda kalena biyo ku dabool.
Isku qas daqiiqado yar ilaa aad ka heleyso kareem ay la socdaan oo la mid ah tii guacamole.
Markaad hesho natiijada la filayo, ku dar miraha sisinta dhulka iyo liin dhanaan. Sidoo kale, ku dar milix iyo basbaas sida aad rabto.
Ka dib si fiican isugu qas si maaddooyinka ay si fiican ula qabsan karaan labeen digaagga. Wakhtigan, ku dar paprika dhulka oo si khafiif ah u sigaar u cab.
Ugu dambeyntiina, kuleylka digaagga barafka qaboojiyaha oo qabooji. Kahor dhadhaminta saxanka, waxaa dhaqan ahaan loo oggol yahay inuu ku qaboojiyo ugu yaraan daqiiqadaha 30 daqiiqadood heerkulka qolka.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo wehelka loogu raaci karo: rooti, karootada ama bariis dhan, iyo kuwo kale.
U isticmaal hummus-kaan bedel caafimaad leh
Noocaan iyo noocyada kale ee digaagga ugaarta hurda ayaa laga yaabaa inay faa'iido u leedahay badalida qaar ka mid ah diyaarinta aan caafimaad ahaan sidaa u wanaagsanayn. Sababtoo ah udgoonkeeda jilicsan iyo dhadhanka, waxay kaa caawineysaa hagaajinta dhadhanka suxuunta badan iyadoo aan lagu darin kaloori badan. Ha iloobin inaad kudarto digaag digaag ah iyo paprika:
Ismariska Turkiga ama kuwa wax lagu kariyo si ay u beddelaan majones ama suugo.
Ukuntu ha u buuxiso si aad ugu beddesho jaallo burbursan.
Digaagga digaagga ama diyaarinta khudradda.
Ku socota cuntadaada rooti, ​​rooti ama buskud.
Tortillas ama galley dhan.
Ha tagin adiga oo aan akhrin: Soo ogow hummus, oo ah cuntooyinka hodanka ku ah antidepressant-ka cuntada leh
Soo koobid ...
Cuntadani waxaa loo yaqaan 'chickpea' iyo paprika hummus 'waxay u caafimaad badan tahay sida cuntada loo cunayo. In kasta oo aan ku kala duwanaan karno dhadhanka kareemkan qabow iyo maaddooyinka kale, paprika waxay siisaa taabasho aad u gaar ah. Si ka sii wanaagsan, waxaan sii haysannaa fikradda ah habka loo isticmaalo kariska caafimaadka leh, sababta oo ah dhammaan maaddooyinka loo isticmaalay waa nafaqo leh oo kaloori yar.
Si kastaba ha noqotee, waa muhiim inaad fiiro gaar ah u yeelatid weelka cuntada. In kasta oo aad raaci karto hummus cuntooyin badan, doorbidaan waxyaabo caafimaad leh, kaloriin hooseeya. Taasi waa sababta, halkii aad la socon lahayd shiilan, rootiga ama digaagga hilibka digaagga, waxaa ugu wanaagsan in lagu cuno rooti geedo dhan ama khudradda cusub.
Qodobka loogu talagalay hummus iftiin leh
Marka aad dhadhamisay qandho kaniiniga cajiibka ah, way adkaan doontaa inaad iska caabiso. Baro sida loo diyaariyo humus! Read more »
Boostada Chickpea hummus leh paprika ayaa marka hore muuqatay Caafimaadkaaga hagaaji.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/houmous-de-pois-chiches-au-paprika/